Nagarik News - लेडी गागा कस्तो ज्यान बनाउँदैछिन्?
लेडी गागा कस्तो ज्यान बनाउँदैछिन्?
22 Aug 2013 | 16:27pm
बिहीबार ६ भाद्र, २०७०
न्युयोर्क — अमेरिकी पप गायिका लेडी गागालाई विवादमा आउन आइतबार पर्खिरहनु पर्दैन। २७ वर्षे यी गायिकाका जहाँ जान्छिन त्यहाँ उपद्रो भइहाल्छ। अहिले चाहिँ उनी आफ्नो तौलको कारण चर्चामा छिन्। एक रेडियो कार्यक्रममा गागाले आफ्नो पहिलेकै शेपको शरीर चाहेको बताइन्। गागाले भनिन्- 'म तौल मेन्टेन गर्न लापरवाह छु।' यो भनाइका कारण 'परफेक्ट शेप' देख्न चाहने उनका फ्यान निरास बनेका छन्।
उनले आफूलाई कस्तो बनाउन चाहेकी भन्ने चाहिँ खुलाएकी छैनन्।
कुनै समय आफ्नो शरीरको तौललाई लिएर डराउने गरे पनि आजभोली त्यस्तो डर लाग्न छाडेको उनको भनाइ थियो। गागाले भनेकी छन् 'शारिरिक आकार बिग्रेर कतै मेरो सांगीतिक यात्रा नै अवरुद्ध हुने त होइन भन्ने चिन्ता थियो आजभोली त्यस्तो लाग्दैन।'
वेबसाइट फिमेलफर्स्टले गागालाई १५ वर्षको उमेरदेखि खानपानसम्बन्धी समस्या रहँदै आएको र त्यसैको कारणले उनको शारिरिक शेपमा समेत समस्या ल्याउने बताएको छ।
गत वर्ष तौल बढे पछि गागाले एउटा अर्धनग्न तस्विरलाई वेबसाइटमा राखेकी थिइन्।
« विकास बोर्डमा साङ्गीतिक रौनक 'वर्ल्डकप'को गीत आयो »